Basanta Subedi – मझेरी डट कम
by Basanta Subedi
Read More »विदाई
April 11, 2021 May 23, 2021
फेव्रुअरी १४ । हाँसो लाग्छ प्रेम दिवस रे । मेरो लागि एउटा फगत सपना । मानु यो के को लागि ?
Read More »अन्तिम कथा
आँगनमा टन्नै भरिभराउ मान्छे । चोटा, कोठा, बार्दली सबै पाहुनाहरुले भरिएका । पञ्चे वाजाको झ्याँई झ्याँई । कोही नाचिरहेका, कोही गीतमा ताल मिलाइरहेका, कोही खाइरहेका । चिनिमायालाई फुर्सदै छैन । पाहुना, आउने जाने इष्टमित्र स्वागत सत्कार आदि ईत्यादि ।
आज हरिकृष्ण अर्थात चिनिमायाको लोग्नेको विवाह तर चिनिमायाको होइन । चिनिमायाको त छ साल पहिले नै बिहे भएको । वावुआमाले मनले खाएको त्यही हरिकृष्णसँग ।
सानो कुवालाई बिशाल संसार मान्ने भ्यागुत्तो
हो ! आज पनि भोलि पनि
संसार सानो छ ! कुवामा सिमित छ !
ट्वार्र ट्वार्र गर्छ थर्काउछु भन्छ
देख्छ सानो संसार
आफ्ना साना आखा हरु ले अनि भनिरहन्छ
संसार सानो छ ! कुवामा सिमित छ !!
उफ्रिन्छ, पछारिन्छ अनि फेरी फर्कन्छ
पर्छ जहाको त्यहीं
कहिल्यै धार्नी नपुग्ने बिचरा भ्यागुत्ता हरु
रोहि रहु, कराइ रहु अनि थर्काइरहु
अनि भनि रहु
संसार सानो छ ! कुवामा सिमित छ !!!
उडिरहेको हवाईजहाज मुनिको छायाँ लाइ
शितलता का लागि प्रयोग गर्ने
त्यसमै हेरेर रमाइरहने एउटा मान्छे
हो ! त्यहि मान्छे हु म
सायद भ्यागुत्तो जस्तै
मलाइ पनि लाग्छ
प्रियसी को डायरी भाग – १
सँगै रहेको मोवाईलमा अचानक हिन्दी गीत वज्यो, तेरे साथ विना…..
हावा को झोक्का संगै
तिम्रो नाम बोकेर
म भित्र केहि पठाउछिन्
सोच्न नसक्ने दिमाग र नधड्किने चिसो मुटु जस्तै
अझै ताप !!!
“तिमीले भनेकोभन्दा ठिक १५ सेकेन्ड ढिलो त आको हो नि!”
“१५ सेकेन्ड रे ! म १ सेकेन्ड पनि कुर्न सक्दिन।”
आफ़्नै मौलिक रचना
रमा सक्दै सक्दिन म एक पल पनि बाँच्न सक्दिन ।
उस्ले धेरै पटक यसै भनेको थियो ! हिजो मात्र अस्ति मात्र अनि त्यो दिन अगाडि मात्र !
हरेक दिन यही मन्त्र जपे जस्तै जपेकैहो हुन त !
बिस्तारै बिस्तारै समयको चक्र फेरिदो रहेछ हिजो साचेका सम्पूर्ण सपनाहरू अनि हिजो भोगेका सम्पूर्ण बिपनाहरू आज तासका महल झै ढल्दा रहेछन र पनि सम्पूर्ण आसाहरूलाई रित्याएर पनि देखावटी हाँसो हास्नै पर्दो रहेछ ।
कुनै दिन आफ्नो मन मुटुमा बसेको आफ्नो सबैभन्दा प्रिय मान्छेको तस्बिरहरू जब फेसबुकको भित्तामा देखियो तब खै म आफुले आँफैलाई सम्हाल्न सकेकै छैन । उसका लागि म कोही होइन । तर मेरा लागि हो ऊ को हो त्यो शायद भगवानले मात्र अन्दाज लगाउन सक्छन । बस म आफ्नो यो आधा सपना र आधा मन बोकेर बाच्दैछु । या अँझै भनौ म बाच्ने कोशिश गर्दैछु । साथमा तिमीलाई शुभकामना जलेको मन मुटुको पीडा तिमीलाई कहिले पनि भोग्नु नपरोस भगवानसँग प्रार्थना गर्न कहिले पनि छुटाउदिन ।
पुण्यप्रसाद प्रसाईंको उपन्यास “आईमाई मान्छे”
पुण्यप्रसाद प्रसाईंको उपन्यास “आईमाई मान्छे” डिकुरा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको रहेछ । यसलाई मैले ढिला गरी आज मात्र पढेर सकें । उपन्यास मुलत नौलो लाग्यो । एउटी नारीको जीवनमा मात्र नभएर सम्पूर्ण नारी जातिमाथि नै उभिएको प्रश्नलाई उठाइएको रहेछ । प्रत्येक पाना र प्रत्येक परिच्छेदले नयाँ रहस्यलाई बोकेका छन । जति पढ्यो उति पढौं लाग्ने छोड्नै मन नलाग्ने । लेखकले प्रत्येक शब्द र बाणीमा रहस्यमय भोगाइलाई चित्रण गरेका छन ।
पत्रकार दीपाकी आमा हुर्कनै लागेको अबोध बाल्यप्रेमलाई अबोध रुपमै अन्त्य गरेर, अनि गरीबी र असमानताको जालमा परेर, एउटा बुढालाई श्रीमान बनाउन वाध्य भइन । यसले गर्दा उनको उर्लदो वैंशलाई शान्त पार्न त के कुमारीत्व समेत नगुमाई बिधवा बनिन । बिधवा जीवनमा नै सामुहिक बलात्कारबाट दीपालाई जन्माउन विवश भइन र जन्माइन पनि ।
माया दियौ साथ दियौ प्रशंसा गरौं कसरी
फराकिलो प्रेमको खाडल म भरौं कसरी ।।
यति धेरै प्रेमको मुल्य कसैले सोध्यो भने
धमिलो यो जीवनको भेल म तरौं कसरी ।।
दिलमा उनकै तस्बिर
दिलमा उनकै तस्बिर राखे मेटाइदियौ किन
आजको यो प्यारो रात तिमीलाई दिऊँ लाग्यो
बाटुलो मुहारमाथि मिठो चुम्बन लिऊँ लाग्यो ।।
कता कता विरानो यो भूमि टेकी बस्दा पनि
प्रेमको मिठो उन्मादलाई अन्त गराई दिऊँ लाग्यो ।।
आफैंलाई आफैंभित्र कति दिन छलाऔँ म ।।
पीडाहरू बल्झिदिँदा आँसु त्यसै झरिदिँदा
निर्जीव यो ठुटो शरिर कति दिन चलाऔँ म ।।
October 26, 2010 April 17, 2021
साँझपख एकान्तमा तिमीलाई भेटुँ लाग्यो
एक आपसको धैर्यताको रेखा मेटुँ लाग्यो ।।
Read More »साँझपख एकान्तमा